Somali daily News – Dowladda Shiinaha Oo Dishay Jawaasiis U Shaqeynaayay Mareekanka…
Dowlada Shiinaha oo kamid ah dowladaha xiligan ugu awooda badan Dunida ayaa dishay jawaasiis badan oo la sheegay in ay u shaqeenayeen una basaasayeen dowlada Mareykanka.
Sida ay ku waramayaan Wakaaladaha Wararka tabiya dowlada Shiinaha ayaa dishay 18-qof oo la sheegay in ay basaas u ahaayeen dowlada Mareykanka, waxaa sidoo kale xabsiga la dhigay tiro badan oo iyana lagu eedeeyay in basaasiin ahaayeen.
Wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka waxaa uu kusoo warramay in mid kamid ah dadkii u basaasayay Mareykanka lagu hor dilay asxaabtiisa, taasi oo ka niyad jabisay kuwii kale inay u sii shaqeyaan CIA-da.
Dalka Shiinaha ayaa ciqaab adag oo isugu jira dil iyo xarig marsiisa dadka basaaska u ah dowladaha Caalamka, waxa ay si gaar ah u beegsadaan dadka ay ku tuhmaan in ay u basaasaan dalka Mareykanka.
Khubaro haatan u shaqeeya hey’adda CIA-da iyo kuwo horay uga soo shaqeeyay ayaa waxaa ay rumesanyihiin in dowlada Shiinaha ay u dhacday amaba ay jabsatay qaabkii ay ku wada xiriirayeen madaxda hey’adda CIA-da iyo basaasiinta, halka qaar kalena ay aaminsanyihiin in mid kamid ah ragaasi uu fashilay qorshaha basaasnimada.